▷ ➡️ သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်းမှာ ဘယ်လိုလဲ။
သမ္မာကျမ်းစာအရကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းခဲ့သလဲ. သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများသည် ကမ္ဘာကြီး၏ဇာစ်မြစ်ကို အဖြေထုတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သိပ္ပံပညာသည် အကြောင်းအရာကို အလင်းပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားသည်။ သို့ရာတွင်၊ အနောက်တိုင်းတစ်ခွင်တွင် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြား အတွေ့အများဆုံးနှင့် လေ့လာအခံရဆုံးဇာတ်လမ်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အရာဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ထိုသို့ယုံကြည်ရန် မဖြစ်နိုင်သည်မှာ မှန်သော်လည်း၊ el Mundo သမ္မာကျမ်းစာသည် ပကတိအလုပ်မဟုတ်သော်လည်း စာရေးဆရာအဖြစ် မှတ်သားထားသင့်သည်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့အမှန်တရားတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
2 သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းခြင်း ပထမနေ့
7.1 သမ္မာကျမ်းစာအရ လူသည် မည်သို့ဖန်ဆင်းသနည်း။
8 သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းခြင်း သတ္တမနေ့
သမ္မာကျမ်းစာအရ၊ ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသည်။ ဘုရား၏လုပ်ရပ်တစ်ခု. သင်၏စကားဖြင့် ဘုရားသခင်၊ စကြဝဠာ၏ဒြပ်စင်အားလုံးကို ဖန်ဆင်းပြီး သတ္တဝါအားလုံးကို အသက်ပေးခဲ့သည်။၎။ ဖန်ဆင်းခြင်းအစတွင်၊ မြေကြီးသည် ပုံသဏ္ဍာန်မရှိ၊ မှောင်မိုက်၊ ဖရိုဖရဲရေများသာရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းအပေါ်မှ ရွေ့လျားသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် တစ်ပတ်အတွင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သိသော ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းခြင်း ပထမနေ့
ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းတဲ့ ပထမဆုံးနေ့မှာ ဘုရားသခင်က "အလင်းရှိပါစေ" လို့ မိန့်တော်မူပြီး အလင်းပေါ်လာတယ်။ အလင်းနှင့်အမှောင်သည် ကွဲကွာပြီး ဘုရားသခင်သည် အချိန်နှင့်အမျှ ခေါ်သည်။ နေ့ရက် အလင်းနှင့် အချိန်အပိုင်းအခြား ည မှောငျမိုကျသော။ ဒီလိုနဲ့ ပထမဆုံးနေ့ရောက်လာတာ။
အစအ ဦး ၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မြေကြီးသည်ပုံစံမရှိ၊ အချည်းနှီး ဖြစ်၍၊ နက်နဲသောအရပ်၌မှောင်မိုက်သည် ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပေါ်မှာလှုပ်ရှားလေ၏။
ဘုရားသခင်ကလည်းလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော် ရှိ၍ အလင်းဖြစ်လေ၏။ ထိုအလင်းသည်လင်းလေ၏။
ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်။ ၊ အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်ခြားခွဲထားတော်မူ၏။
အလင်းကိုနေ့ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ မှောင်မိုက်ကိုညဉ့်ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ ည ဦး နှင့်နံနက်သည်တနေ့၌၎င်း၊
ဘုရားသခင်က မြေကြီးပေါ်မှာ ကောင်းကင်ကို ဖန်ဆင်းတယ်။
ဒုတိယနေ့တွင်၊ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ကို ဖန်ဆင်းတယ်။ မြေကြီးအထက် (လေထု)။ ကောင်းကင်သည် မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အရည်အခြေအနေရှိ ရေကို ဓာတ်ငွေ့ထုတ်သည့်အခြေအနေရှိရေနှင့် ခွဲထုတ်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီလိုနဲ့ ရေသံသရာလည်လာခဲ့တယ်။
မိုGod်းမျက်နှာကြက်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ။ ၊ မိုthat်းမျက်နှာကြက်အောက်၌ရှိသောရေနှင့်၊ မိုthe်းမျက်နှာကြက်အပေါ်၌ရှိသောရေကိုပိုင်းခြားတော်မူသည်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ ထိုနည်းတူ၊
မိုGod်းမျက်နှာကြက်ကိုလည်းမိုGod်းကောင်းကင်ဟူသောအမည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ။ ၊ ည ဦး နှင့်နံနက်သည်ဒုတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၊ ခြောက်သွေ့သောမြေကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။. ရေများသည် မြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို ဖုံးလွှမ်းထားသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ပြန်ဆုတ်ရန် ဘုရားသခင် အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး မျက်နှာပြင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ချန်ထားခဲ့သည်။ ခြောက်သွေ့သော အစိတ်အပိုင်းကို ဘုရားဟုခေါ်သည်။ မြေကြီးတပြင် ရေကို၎င်း၊ ပင်လယ်. ဒီလိုနဲ့ ပေါ်လာတယ်။ တိုက်ကြီးများနှင့် ကျွန်းများ။
ထိုနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် မြေကြီးကို ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ သဘာဝပေါက်ပင်. မျိုးစိတ်တိုင်း၊ မျိုးပွားနိုင်သော အပင်တိုင်းသည် မြေကြီးမှ အညှောက်ပေါက်ကြသည်။
တဖန်ဘုရားသခင်ကမိုthe်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိသောရေစုဝေးစေ၊ ကုန်းပေါ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ ထိုနည်းတူ၊
ကုန်းကိုမြေဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ ရေစုဝေးရာကိုပင်လယ်ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်း၊ ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ။ ၊
တဖန်ဘုရားသခင်က၊ မြေသည်မြက်ပင်ကို၎င်း၊ စပါးသီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်း၊ မြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ပါလျက်သစ်သီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောသစ်ပင်ကို၎င်း၊ ထိုနည်းတူ၊
မြေသည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးသီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်း၊ မိမိ၌မျိုးစေ့ပါလျက်သစ်သီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောသစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေ၏။ ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ။ ၊
ည ဦး နှင့်နံနက်သည်တတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
စတုတ္ထနေ့မှာ ဘုရားသခင်က ကြယ်တွေကို ဖန်ဆင်းတယ်။
စတုတ္ထနေ့မှာ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းတယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ အချိန်၏ဖြတ်သန်းမှုကိုအမှတ်အသား (ရက်၊ လ၊ နှစ် ...) ။ ကောင်းကင် (အာကာသ) နဲ့ ပြည့်နေတယ်။ ကြယ်ပွင့် မြေကြီးထက်ကြီးသော ကြယ်တစ်လုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ sol) နေ့ကို တောက်ပစေခြင်း။ ဘုရားသခင်လည်း ဖန်ဆင်းတယ်။ လညဘက်ထွန်းရန် အနည်းငယ်သေးငယ်သည်။
ထိုအခါ ဘုရားသခင်က၊ နေ့နှင့်ညကို ပိုင်းခြားရန် ကောင်းကင်ပြင်၌ အလင်းများ ရှိပါစေ။ ရာသီ၊ နေ့ရက်၊ နှစ်၊
မိုearth်းကောင်းကင်မျက်နှာကြက်၌တည်။ မြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်း၊ ထိုနည်းတူ၊
ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်အလင်းအိမ်ကြီးနှစ်လုံးတည်းဟူသောနေ့ကိုအုပ်စိုးရသောအကြီးတလုံး၊ နေ့ကိုအုပ်စိုးရန် ပို၍ ကြီးသောအလင်းနှင့်ညကိုအုပ်စိုးရန်အသေးအဖွဲအလင်း၊ ကြယ်များကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နေ့နှင်ညဉ့်ကိုအုပ်စိုး။ အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းငှာ၎င်း၊ ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ။ ၊
ည ဦး နှင့်နံနက်သည်စတုတ္ထနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
ပဉ္စမနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ရေနေသတ္တဝါများကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ပဉ္စမနေ့၌ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ရေနေသတ္တဝါများ. အမိန့်တော်ရှိ၍ ရေထဲတွင် ငါးနှင့် အခြားရေနေသတ္တဝါများဖြင့် ပြည့်နေသည်။အကြီး၊ အသေး။ ဘုရားသခင်လည်း ဖန်ဆင်းတယ်။ ကြက်ဘဲသူ့ကို မြေကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်စေပြီး ကောင်းကင်မှာ ပျံသန်းစေခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်သည် ငှက်များနှင့် ရေနေသတ္တဝါများကို ကောင်းချီးပေးပြီး ကမ္ဘာကို ပြည့်စုံစေရန် မျိုးပွားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကြီးစွာသော သမုဒ္ဒရာ၌ ကျင်လည်သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို၎င်း ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၏။
အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဘွားကြလော့။ ပင်လယ်ရေများကိုပြည့်စေကြလော့။ ငှက်တို့လည်းမြေပေါ်၌များပြားစေသတည်းဟုထိုတိရစ္ဆာန်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ။ ၊
ည ဦး နှင့်နံနက်သည်ပဥ္စမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။
ဆဋ္ဌမနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ကုန်းနေသတ္တဝါများနှင့် လူတို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ဆဋ္ဌမနေ့တွင် ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းသည်။ မြေတိရစ္ဆာန်များ. မြေကြီးပေါ်တွင်နေထိုင်ပြီး မပျံသန်းနိုင်သော တိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားတိုင်းကို မျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိသော ထိုနေ့တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။
ထိုအခါ ဘုရားသခင်က၊ မြေကြီးသည် ၎င်းတို့၏ အမျိုးအလိုက်၊ သားရဲ၊ မြွေ၊ တိရစ္ဆာန်တို့ကို အမျိုးအလိုက် သတ္တဝါတို့ကို မွေးစေ။ သည်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် တိရစ္ဆာန်အမျိုးအလိုက်၊ တိရစ္ဆာန်အမျိုးအလိုက်၊ မြေကြီးပေါ်မှာ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်း ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၏။
သမ္မာကျမ်းစာအရ လူသည် မည်သို့ဖန်ဆင်းသနည်း။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုယ်သူ မိန့်တော်မူပြီး သူဖန်ဆင်းခဲ့သော တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို အုပ်စိုးရန် သူ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် အထူးသတ္တဝါကို ဖန်ဆင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ ပေါ်လာတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ.
ဘုရားသခင်သည် ယောက်ျားနှင့် မိန်းမကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ မျိုးပွားခြင်း၊ ပြည့်စုံစေခြင်း၊ မြေကြီးကို စိုးမိုးစေခြင်းငှာ အမိန့်ပေးတော်မူ၏။ ကုန်းနေ၊ ရေနေနှင့် ပျံသန်းနိုင်သော တိရစ္ဆာန်အားလုံးသည် သူ၏ အမိန့်အောက်တွင် ရှိနေသည်။ ဘုရားရယ် အပင်များကို လူသားများနှင့် တိရစ္ဆာန်အားလုံးအတွက် အစာအဖြစ် ပေးခဲ့သည်။. ဤနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းခြင်းအား ပြီးမြောက်စေသည်။
တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံသဏ္manာန်နှင့်အညီတသဏ္Letန်တည်းလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့။ ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်း၊ မိုthe်းကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်း၊ သားယဉ်တို့ကို၎င်း၊ မြေကြီးတပြင်လုံး၌၎င်း၊
ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္inန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း။ ၊
အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဘွားကြလော့။ မြေကြီးကိုပြည့်စေ။ နိုင်ကြလော့။ ပင်လယ်ငါးနှင့်မိုthe်းကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်း၊ အသက်ရှင်။ မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်စိုးကြလော့။
ဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလော့။ မြေတပြင်လုံး၌စပါးသီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်း၊ မျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောသစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်း၊ မင်းတို့စားရလိမ့်မယ်။
မြေကြီးသားရဲအပေါင်းတို့၊ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်အပေါင်းတို့နှင့် အသက်ရှိသော မြေကြီးပေါ်မှာ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့အတွက်၊ စိမ်းလန်းသောအပင်ရှိသမျှတို့သည် စားစရာဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ အဲဒါ။
ဘုရားသခင်သည် သူဖန်ဆင်းသမျှကို မြင်တော်မူပြီး အလွန်ကောင်းသည်။ ညဦးနှင့် နံနက်သည် ဆဋ္ဌမနေ့ဖြစ်သတည်း။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းခြင်း သတ္တမနေ့
သတ္တမနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် အနားယူပြီး သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။
သတ္တမနေ့၊ ဘုရားသခင် အနားယူပါ။. သူဖန်တီးထားတဲ့ အရာအားလုံးက ကောင်းတာကြောင့် သူကျေနပ်တယ်။ သတ္တမနေ့ကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေး၍ သန့်ရှင်းစေသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်၊
သတ္တမနေ့ရက်ရောက်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်စသတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည် ဖြစ်၍၊ ဖန်ဆင်းသမျှသောအမူအရာတို့သည်ပြီးစီးပြီးမှ၊ ထိုသတ္တမနေ့၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူ၏။
ထိုသတ္တမနေ့ကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကြီး ပေး၍ သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောထိုအမူအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူ၏။
စာသားအရဖြစ်စေ၊ တုနှိုင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ ဖန်ဆင်းခြင်းဇာတ်လမ်းက ကမ္ဘာကြီးကို ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြသသည်။ အခွင့်အလမ်းကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးနှင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို အုပ်စိုးရှင်များနှင့် ကာကွယ်သူများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ပြသသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ ငါတို့ကို ချမ်းသာစေချင်တယ်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးကမင်းနားလည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လိုဖန်ဆင်းသလဲ။. သိချင်နေပြီဆိုရင်တော့ သတ္တမနေ့၌ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသနည်း, ဆက်လက် browsing Discover.online ။